Abathunywa Bevangeli Abangakumbi, Emva Koko AmaNgqina Ayekiswa Ukushumayela | Imbali YaseIndonesia
NgoJulayi 9, 1964, iSebe Lezobulungisa laseIndonesia lawubhalisa ngokusemthethweni uMbutho WaBafundi beBhayibhile, umbutho osemthethweni wamaNgqina kaYehova. Kodwa ngaphambi kokuba abazalwana bakhululeke ngokupheleleyo ekunquleni, kwakufuneka babhalise kwiSebe Lemibandela Yezonqulo. Eli Sebe lafumana icebiso kwiCandelo Elikhokela Iicawa ZamaKristu, elalinabaqeshwa abangamaProtestanti angagungqiyo kunqulo lwawo nawayewathiy’ egazini amaNgqina kaYehova.
Ngenye imini umzalwana wadibana negosa eliphezulu elalisebenza ngokusondeleyo noMphathiswa Wemibandela Yezonqulo. Bafumanisa ukuba bangabelali enye, baza bancokola kamnandi ngolwimi lwabo lomthonyama. Xa lo mzalwana waxelela eli gosa ngeengxaki amaNgqina awayenazo neCandelo Elikhokela Iicawa ZamaKristu, lalungiselela ukuba abazalwana abathathu badibane nomphathiswa, owayeliSilamsi elinobuhlobo novelwano. NgoMeyi 11, 1968, umphathiswa wakhupha umyalelo wokuba amaNgqina kaYehova alunqulo olusemthethweni yaye anelungelo lokuqhubeka nomsebenzi wawo eIndonesia.
Eli gosa liphezulu lagqiba ekubeni lingayi kwiCandelo Elikhokela Iicawa ZamaKristu ukuze amaNgqina asemzini akwazi ukufumana amaphepha-mvume okungena kwelo lizwe. Ngoncedo lwalo, kwafika abathunywa bevangeli abayi-64 eIndonesia kwiminyaka nje embalwa.
Ngo-1968, malunga ne-300 yabathunywa bevangeli noovulindlela abakhethekileyo kunye nabavakalisi abayi-1 200 bashumayela iindaba ezilungileyo kulo lonke elaseIndonesia. Abathunywa bevangeli babaqeqesha kakuhle abazalwana basekuhlaleni. Oku kwabanceda bakhawuleza ukwazi izinto ezingakumbi zobuthixo. Olu qeqesho lwafika kanye ngexesha elifanelekileyo kuba intshutshiso yayisemnyango.
Abefundisi Bafumana “Isipho SeKrismesi”
Ngo-1974, kwiCandelo Elikhokela Iicawa ZamaKristu laqalisa apho beliyeke khona ukuvala umsebenzi wamaNgqina kaYehova. Umalathisi-jikelele weli sebe wabhalela zonke iiofisi zeSebe Lemibandela Yezonqulo, etyhola amaNgqina kaYehova ngelithi awabhaliswanga ngokusemthethweni. Wabongoza abasemagunyeni ukuba bakhangele nantoni na enokubangela ukuba batshutshise amaNgqina. Abaninzi kubo abazange basihoye eso sibongozo. Kodwa abanye basebenzisa elo thuba ukuze baphelise iintlanganiso baze bavale umsebenzi wokushumayela kwindlu ngendlu.
NgoDisemba 24, 1976, iphephandaba lathi umsebenzi wamaNgqina kaYehova uvaliwe
Kanye ngelo xesha, iBhunga LeeCawa Zehlabathi laceba ukuba nendibano yezizwe ngezizwe eJakarta, nto leyo eyawacaphukisayo amaSilamsi. Ngenxa yokwanda kongquzulwano kwezonqulo, zange ibe sabakho loo ndibano. Noko ke, umsebenzi wamaKristu wokuguqul’ abantu waba yingxaki enkulu, kangangokuba abaninzi kwezopolitiko babesoyika. Kubonakala ngathi abefundisi bazama ukulibeka kumaNgqina kaYehova ityala ngenxa yomsebenzi wawo wokushumayela. Oku kwabangela ukuba abasemagunyeni abangakumbi bawajonge kakubi amaNgqina.
NgoDisemba 1975, ngoxa ungquzulwano kwezonqulo lwalusaqhubeka lusanda, i-Indonesia yahlasela iMpuma yeTimor (ngoku ebizwa ngokuba yiTimor-Leste), eyayifudula ilithanga lasePortugal. Kwiinyanga ezisixhenxe emva koko, iMpuma yeTimor yathinjwa, nto leyo eyabangela ukuba olo hlanga luzaliswe ngumoya wokuthand’ izwe. Abazalwana abazange bathathe cala kwiipolitiki, abavuma nokwenza iinkonzo zasemkhosini okanye ukukhahlela iflegi, nto leyo eyabenza bavutha ngumsindo abaphathi bomkhosi abaphezulu. (Mat. 4:10; Yoh. 18:36) Bekhuphe nowokugqibela umsindo, abefundisi banyanzelisa urhulumente ukuba achukele amaNgqina. Ekugqibeleni, phakathi kuDisemba 1976, abefundisi bafumana “isipho seKrismesi”—urhulumente wenza isibhengezo esithi umsebenzi wamaNgqina kaYehova uvaliwe.
EIndonesia: Kufika Abathunywa Bevangeli Abangakumbi